Banyere Anyị - Huaian Shengjie Hydraulic Machinery Co., Ltd.
Ị nọ ebe a : Home >gbasara Anyị
Gbasara ụlọ ọrụ anyị
Oge izizi iji nye gị azịza ọkachamara.
Bulata Na Oge
Ọnụ ahịa ọnwụ
Mkpụrụ obi azụmahịa
Anyị na-arụ ọrụ azụmaahịa zuru ụwa ọnụ ma anyị lekwasịrị anya na mpaghara Europe, Asia na Africa yana iwulite mmekọrịta siri ike na ndị ahịa anyị. Agbanyeghị, ọtụtụ ngwa ahịa na-emepe emepe dị ka mkpa ndị ahịa anyị si dị.
Ngwa ngwa ngwa na Ọrụ Nlele.
Ogo na ndị ahịa na-ebute ụzọ bụ ọkwa anyị.
Ulo oru etinyere na sayensi, ulo oru, ahia.
ANYỊ mmepụta ihe
Ndị na-emepụta ọkachamara